Fametrahana ny fanjakana tan-dalàna: zandary 79 nenjehina noho ny tsy fanarahan-dalàna | NewsMada
Par Taratra sur 20/10/2020
Manadio ny ao anatiny manoloana ireo saonjo iray lohasaha. Niaiky ny mpandrindra ny ady amin’ny kolikoly sy ny fitorohana eo anivon’ny zandary, ny Kly Andrianarivo Herilala fa misy ny lesoka eo anivon’izy ireo.
Manaporofo izany ny antontanisa. Miisa 79 ireo zandary nenjehina noho ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fihoaram-pefy. Ahitana manamboninahitra sy manambonihaitra lefitra izy ireo, araka ny nambarany. “Misy ny tsy fahaiza-miasa. Mbola anatin’ny ady amin’ny kolikoly izahay ary efa tsy voalohany intsony amin’izany fahalovana izany noho ny ezaka natao. Misy ireo zandary jiolahy tadiavina sy karohina ary horoahina…”, hoy izy tamin’ny adihevitra, niresahana momba ny fanjakana tan-dalàna tetsy Ampefiloha, omaly. Nikarakara izany ny eo anivon’ny HCDDED ary nisolo tena ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Ravalomanana Richard ny tenany tamin’ny famelabelarana.
Ady amin’ny tsimatimanota
Nohitsiny fa miady amin’ny tsimatimanota koa izy ireo ary tsy misy ny ambonin’ny lalàna. “Mandray ireo fitarainana amin’ny fanamparam-pahefana na tsindrihazolena ataon’ny zandary izahay”, hoy ihany izy. Na izany aza, nanteriny fa mampianatra sy manabe ny zandary. Any amin’ny farany vao manenjika. “Tafiditra amin’ny fanofanana azy ireo eny anivon’ny sekoly ny fanajana ny zon’olombelona sy ny fanjakana tan-dalàna ary ny ady amin’ny kolikoly”, hoy ihany izy.
Maro ireo zandary lavo am-perinasa
Niaiky koa anefa ny tenany fa maro ireo zandary lavo am-perinasa, namoy ny ainy. Tafiditra amin’ny resaka zon’olombelona koa izany, araka ny nambarany.
Tsiahivina fa ireto ny laharan-telefaonina ahazoana manao fitarainana amin’ny mety ho tsy fanarahan-dalana na fihoaram-pefy ataon’ny zandary : 034 12 005 25 – 034 14 013 88 – 034 84 752 98.